State Counsellor arrives back in Nay Pyi Taw – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor arrives back in Nay Pyi Taw
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi who was in Hungary onaworking visit left Budapest, Hungary for Nay Pyi Taw by air on7June at 11:45 a.m. local time.
The State Counsellor and party were seen off by Hungarian State Secretary for the Ministry of Foreign Affairs and Trade Dr. Csaba Balogh, Myanmar Ambassador to Hungary U Myo Aye, Hungarian Ambassador to Myanmar Mr. Szilveszter Bus and officials of the Myanmar Embassy in Hungary at the Budapest International Airport.
The State Counsellor and party reached Thailand on 8 June morning at 6:30 a.m. local time and was welcomed by Myanmar Ambassador to Thailand U Myo Myint Than and embassy officials at the Suvarnabhumi International Airport.
The State Counsellor and party then left Bangkok by Myanmar National Airlines special flight and arrived back in Nay Pyi Taw on 8 June morning at 9:30 a.m.
The State Counsellor and party were welcomed by U Min Thu, Union Minister for the Office of the Union Government, Nay Pyi Taw Council Chairman Dr. Myo Aung, Ambassador of the Czech Republic Mr. Jaroslav Dolecke and officials at the Nay Pyi Taw International Airport.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
(၈-၆-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဘူဒါပက်စ်မြို့တွင် အလုပ်သဘောခရီးစဉ်ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇွန် ၇ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ၁၁၄၅ နာရီတွင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဘူဒါပက်စ်မြို့မှ နေပြည်တော်သို့ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အား ဟန်ဂေရီနိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန State Secretary H.E. Dr. Csaba BALOGH၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးအေး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Szilveszter Bus နှင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက ဘူဒါပက်စ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့သည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ကြရာ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းနှင့် သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက ဗန်ကောက်မြို့ သုဝဏ္ဏဘူမိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့သည် ဗန်ကောက်မြို့မှတစ်ဆင့် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြရာ နံနက် ၀၉၃၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမင်းသူ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Dolecke တို့က နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။